Umuzi kaMusa Mseleku uzoba yingxenye yohlelo lwabe-South Coast Tourism | isiZulu
Umuzi kaMusa Mseleku uzoba yingxenye yohlelo lwabe-South Coast Tourism
'Ezokuvakasha zibalulekile eNingizimu Afrika'
Imicimbi yezamabhizinisi iyaseza - Ungqongqoshe
Bancome ezokuvakasha eThekwini
eThekwini - Umndeni kaMusa Mseleku owazakhela udumo yena nomndeni wabo ngohlelo lwempilo yabo uThando nesiThembu, uyingxenye ebalulekile yezokuvakasha eSouth Coast.
Lokhu kuvele ngoLwesithathu ntambama lapho inhlangano yezokuvakasha i-Ugu South Coast Tourism yethula ngokusemthethweni umkhankaso weGreat Drives Out emcimbini we-Travel Indaba.
Ukwethulwa kwalolu hlelo lwesekwe kakhulu yizikhulu ze-Tourism KZN, amalungu ebhodi loGu South Coast Tourism uVictor Mzulwini kanye nesikhulu sayo uJustin Mackrory, amalungu kamasipala kanye nawo umndeni wakwaMseleku.
Echaza ngalolu hlelo uJustin Mackrory uth: "Lapha sikhethe izindawo ezine ezikhethekile ukuba ngaphansi kweGreat Drives Out lapho sizobe sivakashisa izihambeli zethu ezindaweni zasemakhaya bafunde kabanzi ngamasiko, ubuciko kanye nezamagugu.
OLUNYE UDABAITourism KZN nohlelo lokuqwashisa abasebenza kwezokuvakasha
Lolu hlelo luzonika izivakashi amathuba okubona ezinye izindawo ezikhethekile kulesi sifunda ngale kukovakashela emabhishi.
UMazethu Zondi, oyisikhulu esiphezulu sezokuthuthukiswa kwezokuvakasha kwisifunda sase-South Coast uthe: "Siyaziqhenya kakhulu ngomsebenzi esiwenzayo ngalolu hlelo. Siqeqeshe ama-tour guides, sasungula nezindlela ezintsha okuzohanjwa ngazo, sahlela izikhangiso zakhona kanye nemikhiqizo yezokuvakasha ehambisana nakho.
Lokhu kuhlanganisa, izindawo zokulala, izinto nezinhlelo ezikhethekile abantu abangazenza uma bevakashile, ezokngcebeleka kanye namabhizinisi amancane akhona nokuyinto ezokwenza umphakathi uzuze lukhulu.
Izindawo ezingaphansi kwalolu hlelo yi-KwaNzimakwe Experience nokunguhambo oluqala esikhungweni iWowZulu Welcome Centre ku-R69 Road phakathi kweMpenjati Nature Reserve naseZinqoleni.
Nizobe nibheke endaweni yakwaNzimakwe lapho nizokwamukelwa khona yiNduna yendawo, nithole nethuba lokuhlola kumelaphi wendabuko osebenzela kule ndawo. Buningi ubuhle nobukhazikhazi bobuciko bezandla obenziwa wumphakathi walapha. Uma nisuka lapha nizodlulela ebandleni lakwaShembe eliphezukwentaba nokuyindawo enhle kakhulu.
Uhambo luqhubeka luze lufike eMsenti Art Academy lapho uzofunda kabanzi ngezinhlelo zomphakathi, bese nidlulela entabeni uXhuluweshe mountain naseNojani Tavern.
Indawo yesibili engaphansi kwalolu hlelo yiNyandezulu Experience, nokuyindawo engamakhilomitha angu-9 kusukela eShelly Beach.
Lapha wamukelwa wubuhle bolwandle ube uthokozela ubuciko obukhiqizwa wumphakathi wakule ndawo. Uhambo luqala eMfihlo Guest House nisuke lapho niqwale intaba iNtantana ebheke empophomeni iNyandezulu. Nakhona lapha ningabonana neSangoma sendawo nidlulele ejoyintini eDafeleni.
Nizothi ukuhambahamba esontweni lakwa Shembe entabeni uMdlungwana edume kakhulu ngokuba nesilwane esinamakhanda ayisikhombisa ngakho-ke awufuneki umsindo kule ndawo.
Enye indawo engaphansi kwalolu hlelo yiKwaXolo Caves, eduze nedolobha iPort Edward, lapha nizothatha uhambo lwemizuzu emihlanu niyongena emadwaleni anemibhalo emihle yama-San nokuyindawo okukholakala ukuthi ineminyaka engaphezu kwengu-100.
Kunzima ukungena kulawa madwala, ngakhoke kuyaye kucelwe kuqala ukuba umholi wabavakashi athole imvume yokuba ningene kule ndawo niyibone.
Indawo yokugcina enizoyifakashela yiMseleku Homestead Tours lapha nizobona wonke umuzi walesi siqumama esinesithembu esidume kakhulu ngohlelo lwempilo yaso uThando nesiThembu. Lapha nizohambele nekhaya elikhulu lakwaMadlala, nivakashele indawo yaseMzumbe ninethezeke noMusa kanye namakhosikazi akhe amane uMaCele, MaYeni, MaKhumalo kanye noMaNgwabe.
Uma ufuna ukuhambela kuzo zonke lezi zindawo, kumele uhlele kusenesikhathi ukuze uzothola amanani nanokuthi kuhanjwa kanjani.
Umnyango wezokuVakasha unamasu amahle okulwa nokwentuleka kwemisebenzi
Umnyango wezokuVakasha kuleli ube nemihlangano lapho bekuhlanganiswe khona osomabhizinisi nalobo ababamba iqhaza kule mboni engqungqutheleni ye-Travel Indaba.
Ushonile owasemame wakwaNongoma oshiswe yisoka ngophethiloli
Amaphoyisa akwaZulu-Natal asiqinisekisile isigameko esibikwe endaweni yaseNkunzani kwaNongoma.
Usegwetshiwe owayengukhomishana wamaphoyisa ngamacala okukhwabanisa
OwayenguKhomishana wamaphoyisa esifundazweni sase-Western Cape u-Arno Lamoer usegwetshwe iminyaka engu-8 walengiselwa emibili.